China Forged Lap Joint Loose Flange ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |CZ IT
အမျိုးအစား-Lap Joint/ Loose Flange
စံသတ်မှတ်ချက်-ANSI B16.5၊EN1092-1၊ SABA1123၊ JIS B2220၊ DIN၊ GOST၊ UNI၊ AS2129၊ API 6A စသည်ဖြင့်
ပစ္စည်း- ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ ပိုက်လိုင်းသံမဏိ၊ Cr-Mo အလွိုင်း
အထုပ်-Seaworthy Wooden Case
Lap Joint flanges များ၏ အားသာချက်များ
ဖော့ပေါင်ဆစ် လျော့ရဲသော Flange
ထုတ်ကုန်အမည် ရင်ခွင်အဆစ်/ အနားကွပ်လွတ်
စံ ANSI B16.5၊EN1092-1၊ JIS B2220 စသည်တို့
ပင်တိုင်အဆုံး MSS SP 43၊ ASME B16.9
ပစ္စည်း အစွန်းခံသံမဏိ:A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, 317/317L, 904L, 1.4301.4, 41,143, etc.
ကာဗွန်သံမဏိA105၊ A350LF2၊ S235Jr၊ S275Jr၊ St37၊ St45.8၊ A42CP၊ A48CP၊ E24 ၊ A515 Gr60၊ A515 Gr 70 စသည်တို့
ပိုက်လိုင်းသံမဏိA694 F42၊ A694F52၊ A694 F60၊ A694 F65၊ A694 F70၊ A694 F80 စသည်တို့။
နီကယ်သတ္တုစပ်inconel600၊ inconel625၊ inconel690၊ incoloy800၊ incoloy 825၊ incoloy 800H၊C22၊ C-276၊ Monel400၊ Alloy20 စသည်တို့။
Cr-Mo သတ္တုစပ်A182F11၊ A182F5၊ A182F22၊ A182F91၊ A182F9၊ 16mo3,15Crmo စသည်ဖြင့်
လျှောက်လွှာ ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းနှင့် အာကာသလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်ငွေ့အိတ်ဇော၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်မှု၊ ရေသန့်စင်မှု၊ စသည်တို့။
ပိုက်ဆစ်အနားကွပ်တစ်ခုသည် အနားကွပ်ချိတ်ဆက်မှု၏တစ်ဖက်စီအတွက် ပိုက်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု၊ stub end နှင့် loose backing flange တို့ လိုအပ်သည်။လျော့ရဲသောကျောထောက်နောက်ခံအနားစသည် ပိုက်နှင့်တင်ပါးဂဟေဆက်ထားသည့် stub ၏အပြင်ဘက်အချင်းနှင့် အံကိုက်ဖြစ်သည်။ကျောဘက်အနားကွပ်သည် ပိုက်ကို ဂဟေမဆက်ဘဲ လှည့်ပတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် စိုက်နေစဉ်အတွင်း flanges ကို ဦးတည်ရန်လိုအပ်သောအခါတွင် အထူးအသုံးဝင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ကျောဘက်အနားကွပ်သည် လုပ်ငန်းစဉ်အရည်နှင့် မထိတွေ့သောကြောင့်၊ ၎င်းကို သံချေးတက်သည့်နည်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဆိပ်သင့်ပြီး ပိုက်အား ASTM A312 TP316L တွင်ကဲ့သို့ သံမဏိဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ပင်တိုင်အဆုံးကိုလည်း SS 316L ဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။သို့သော်၊ ကျောဘက်အနားကွပ်ကို စျေးသက်သာသော ASTM A105 ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပေါင်းစည်းခြင်းနည်းလမ်းသည် ဂဟေလည်ပင်းအနားကွပ်ကဲ့သို့ ခိုင်ခံ့မှုမရှိသော်လည်း ဝက်အူပေါက်၊ socket weld နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ချော်ထွက်ခြင်းထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု တင်းပြည့်သော ဂဟေဆော်ရန် လိုအပ်ပြီး အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခု လိုအပ်သောကြောင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပိုမိုစျေးကြီးသည်။
Stub End ကို ကျောထောက်နောက်ခံအခြမ်းအဖြစ် Lap Joint flange ဖြင့် အမြဲတမ်းအသုံးပြုပါမည်။
ဤအနားကွပ်ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖိအားနည်းသော နှင့် အရေးပါသော အသုံးအဆောင်များတွင် အသုံးချပြီး စျေးသက်သာသော flange နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် stainless steel ပိုက်စနစ်တွင်၊ ပိုက်အတွင်းရှိ ထုတ်ကုန်နှင့် ထိတွေ့မှုမရှိသောကြောင့် ကာဗွန်သံမဏိအနားကွပ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Stub Ends များကို ပိုက်လုံးပတ်အားလုံးနီးပါးတွင် ရနိုင်ပါသည်။အတိုင်းအတာနှင့် အတိုင်းအတာ ခံနိုင်ရည်များကို ASME B.16.9 စံနှုန်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည်။ပေါ့ပါးသော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော Stub Ends (အသုံးအဆောင်များ) ကို MSS SP43 တွင် သတ်မှတ်ထားသည်။
LAP Joint Flange ၏ အားသာချက်
ပိုက်ပတ်ပတ်လည်ကို လွတ်လပ်စွာ လှည့်ပတ်နိုင်မှုသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အနားကွပ်တုံးအပေါက်များကို တန်းစီစေပါသည်။
ပိုက်အတွင်းရှိအရည်များနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိပါက ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသောပိုက်ပါရှိသော စျေးသက်သာသော ကာဗွန်သံမဏိအနားကွပ်များကို မကြာခဏအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။
လျင်မြန်စွာ တိုက်စားခြင်း သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်မှုရှိသော စနစ်များတွင် အနားကွပ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
မျက်နှာ ပြား ၊ Radius သည် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။
2. hub သို့မဟုတ် hub မပါဘဲ
3. မျက်နှာကို ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
Flange ၏မျက်နှာစာရှိ အပြီးသတ်အား Arithmetical Average Average Roughness Height (AARH) အဖြစ် တိုင်းတာသည်။အသုံးပြုသည့်စံနှုန်းဖြင့် အပြီးသတ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ANSI B16.5 သည် 125AARH-500AARH(3.2Ra မှ 12.5Ra) အကွာအဝေးအတွင်း မျက်နှာပြင်ဆင်မှုများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။အခြားသော အပြီးသတ်မှုများကို တောင်းဆိုမှုတွင် ရနိုင်သည်၊ ဥပမာ 1.6 Ra max၊1.6/3.2 Ra၊ 3.2/6.3Ra သို့မဟုတ် 6.3/12.5Ra။အကွာအဝေး 3.2/6.3Ra သည် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။
• အလွှာတစ်ခုစီသည် မျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်ရန် ပလပ်စတစ်ဖလင်ကိုအသုံးပြုသည်။
• သံမဏိအားလုံးအတွက် အထပ်သားအိတ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။ပိုကြီးသောအရွယ်အစားအတွက် ကာဗွန်အနားကွပ်ကို အထပ်သားပြားဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးနိုင်ပါသည်။
• သင်္ဘောအမှတ်ကို တောင်းဆိုမှုအရ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
• ထုတ်ကုန်များတွင် အမှတ်အသားများကို ထွင်းထု သို့မဟုတ် ရိုက်နှိပ်နိုင်သည်။OEM လက်ခံပါသည်။
• UT စမ်းသပ်မှု
• PT စမ်းသပ်မှု
• MT စမ်းသပ်မှု
• Dimension စမ်းသပ်ခြင်း။
ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ QC အဖွဲ့သည် NDT စစ်ဆေးမှုနှင့် အတိုင်းအတာ စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို စီစဉ်ပေးပါမည်။ TPI (တတိယအဖွဲ့အစည်း စစ်ဆေးခြင်း)ကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
1. စစ်မှန်သောကုန်ကြမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ 2. ကုန်ကြမ်းခုတ် 3. ကြိုတင်အပူပေးပါ။
4. အတုလုပ်ခြင်း။ 5. အပူကုသမှု 6. Rough Machining
7. တူးဖော်ခြင်း။ 8. Fine maching 9. အမှတ်အသားပြုခြင်း။
10. စစ်ဆေးရေး 11. ထုပ်ပိုးခြင်း။ 12. ပေးပို့ခြင်း။
ယခင်- အတုပြုလုပ်ထားသော Blind Flange
နောက်တစ်ခု: Forged Plate Flange
flange ၏မျက်နှာစာရှိ အပြီးသတ်ကို Arithmetical Average Average Roughness Height (AARH) အဖြစ် တိုင်းတာသည်။အသုံးပြုသည့်စံနှုန်းဖြင့် အပြီးသတ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ANSI B16.5 သည် 125AARH-500AARH(3.2Ra မှ 12.5Ra) အကွာအဝေးအတွင်း မျက်နှာပြင်ဆင်မှုများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။အခြားသော အပြီးသတ်မှုများကို တောင်းဆိုမှုတွင် ရနိုင်သည်၊ ဥပမာ 1.6 Ra max၊1.6/3.2 Ra၊ 3.2/6.3Ra သို့မဟုတ် 6.3/12.5Ra။အကွာအဝေး 3.2/6.3Ra သည် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။
Dn4000 Lap Flange အတုလုပ်ခြင်း။
အရည်အသွေးမြင့် Stainless Steel Lap Joint Flange သည် တရုတ်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
တိုက်တေနီယမ် ပိုက်အဆစ် အနားကွပ်